23 Oct 2021 | शनिबार, ६ कार्तिक, २०७८ | Edition : Nepal | UK | Australia
जलवायुसम्बन्धी वैज्ञानिकहरूलाई भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइने
एजेन्सी । नोबेल कमिटीले सन् २०२१ को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई दिने घोषणा गरेको छ । नोबेल पुरस्कार पाउनेमा मध्ये अमेरिकी जापानी नागरिक स्युकुरो मानाबे, जर्मनी क्लाउस हस्सेल्मान र इटलीका जर्जीयो पारिसी रहेका छन् । विस्तृतमा
विश्वका पाँच रोचक कुराहरु
उत्तर प्रदेशमा पनि काँग्रेसलाई ठुलो झट्का, प्रियंका गान्धीकै सल्लाहकारले छोडे पार्टी
बिल गेट्सकी छोरी जेनिफरले गरिन् यी व्यक्तिसँग विवाह
विश्व इतिहासमा अनौठो रेकर्डः थाहा पाउनुहोस् महँगा डिभोर्सहरुबारे
एजेन्सी । केही यस्ता डिभोर्सका किस्साहरु रहेका छन् जसले विश्वलाई नै आश्चर्य चकित पारेका छन् । विश्व इतिहासमा अनौठो रेकर्ड यस डिभोर्सले पनि राखेको छ ।
धनीका कुराः दाईले ऋण तिरिदिएपछि भावुक बने अनिल
एजेन्सी । मुकेश अम्बानीले आफ्ना भाइ अनिल अम्बानीलाई जेल जानबाट बचाएका छन् । रिलायन्स कम्युनिकेशनका अध्यक्ष अनिल अम्बानीले इरिक्सनलाई तय गरिएको समय सिमाभित्र ७.७ करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । नत्र उनी जेल जाने निश्चित थियो ।
जब भ्रष्टाचारको आरोपमा कहलिएका नेताहरु जेल गए
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा ठुला ठुला पदमा आसिन व्यक्तिहरुको नाम बाहिर आउन थालेको छ ।
अन्ततः अन्तिम समयमा मुकेश अम्बानीले अनिल अम्बानीलाई जेल जानबाट यसरी जोगाए
मुकेश अम्बानीले आफ्ना भाइ अनिल अम्बानीलाई जेल जानबाट बचाएका छन् । रिलायन्स कम्युनिकेशनका अध्यक्ष अनिल अम्बानीले इरिक्सनलाई तय गरिएको समय सिमाभित्र ७.७ करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । नत्र उनी जेल जाने निश्चित थियो ।
यी हुन् भुटानका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरु
सानो र सुन्दर देश हो भुटान । पर्यटकको मुख्य गन्तव्यमा पनि भुटान पर्ने गर्छ । राजतन्त्र रहेको भुटानका बारेमा धेरै कुरामा बाहिर आउँदैनन् । यस देशमा रहेका धनी व्यक्तिहरुको बारेमा पनि कमै चर्चा हुन्छ ।
मृत्युसँग जोडिएका १० डरलाग्दा तथ्य
एजेन्सी । मृत्यु जुनसुकै बेला, कुनै पनि रुपमा आउन सक्छ । संसारका कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्यु कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारे थाहा हुँदैन ।
यी हुन् अष्ट्रेलियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरु, थाहा पाउनुहोस् कसको कति सम्पत्ति ?
अष्ट्रेलिया अर्वपतिहरुको सुची ठुलै रहेको छ । उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।
एउटा अजबगजबको गाउँ !
एजेन्सी । कुनै पनि शहर, कुनै पनि गाउँ यस्तो छैन जहाँ बच्चाको आवाज नगञ्जिएको होस् । तपाईलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ भारतमा एउटा यस्तो गाउँ पनि रहेको छ जहाँ ५० सालएता एउटा पनि बच्चा जन्मिएका छैनन् ।
विश्वकै ठुलो भान्छाबारे रोचक कुराहरु
विश्वको सबैभन्दा ठुलो भान्छा कहाँ रहेको छ ? सायद यसबारे कमै मानिसहरुले ध्यान दिने गर्छन् । तर भारतमा यस्ता धेरै ठुला भान्छाहरु रहेका छन् जसमा दिनहुँ लाखौ मानिसहरुले भोजन गर्ने गर्छन् ।
यी हुन् विश्वकै उत्कृष्ट महिला फाइटर पाइलटहरु
एजेन्सी । पछिल्लो समय महिलाहरुले पनि विभिन्न पेसामा आफुलाई सफलतापुर्वक स्थापित गर्न सक्षम भएका छन् । पुरुषसँगको तुलनाभन्दा पनि आफ्नो सक्षमताका आधारमा उनीहरु अगाडि बढेको देखिन्छ ।